ISecluded 4 Bedroom Lakefront Cabin kwiLac La Ronge - I-Airbnb
ISecluded 4 Bedroom Lakefront Cabin kwiLac La Ronge
Indlu yamaplanga yonke sinombuki zindwendwe onguShala
Ikhabhinethi ekude eLac la Ronge-ilungile kusapho kunye nomhlobo wokubaleka! Eyoyikekayo ehlotyeni kwaye imilingo ebusika.
Ikhabhathi entle yosapho enobukhulu obuzimeleyo eqeshiswayo eLac la Ronge, ifikeleleka kuphela ngesikhephe, inqwelomoya edadayo okanye inqwelomoya yekhephu. Nceda uqaphele ukuba akukho ndlela yokufikelela, ufuna isikhephe sakho ukuze ufike kwikhabhinethi. Kukho ulwandle oluncinci olunesanti kunye neendawo ezininzi zokuqubha. Le yindawo entle yokuhlangana enkulu okanye encinci, enegumbi lomntu wonke.
Ikhabhinethi inika bonke ubutofotofo bekhaya, kuquka amandla kunye namanzi abalekayo. Inkqubo yelanga inika onke amandla kwaye amagumbi okuhlambela kunye nekhitshi asebenza ngokupheleleyo ngamanzi asebenzayo kwiinyanga zasehlotyeni.
Kwiinyanga zasebusika akukho manzi ahambayo - sizisa iijagi zamanzi okuhlamba nokusela.
Ikhabhathi enkulu inekhitshi elinamanzi abalekayo, isitovu sepropane kunye netafile enkulu yokutyela. Kukho inkqubo ye-osmosis ebuyela umva ekhitshini yamanzi okusela. Igumbi lokuhlambela lineshawari, yangasese egungxulwayo kunye nesinki. Igumbi lokuhlala line-futon ekwazi ukulala ezimbini kunye nebhedi yecandelo kunye nebhedi yokukhupha ekwazi ukulala ezimbini. Kukho indawo yomlilo enkulu yeenkuni kunye neefestile ezininzi ezijonge echibini. Igumbi lokulala linebhedi enkulukazi kunye nendawo yokuhlala ekufutshane nefestile enkulu ejonge echibini. Kukho igumbi lokuhlamba impahla elinewasha kunye nesomisi esikhoyo ukuze sisetyenziswe. Ikhabhini engundoqo nayo inomgangatho omkhulu ngaphambili kunye nenye ngasemva kwezo ntsuku zinemimoya.
Ikhabhinethi yeendwendwe inamagumbi amabini okulala aneebhedi ezilingana nokumkanikazi, kunye negumbi lesithathu lokulala linebhedi enebhedi yokutsala. Indlu yeendwendwe nayo inegumbi lokuhlambela elineshawa, indlu yangasese kunye nesinki.
Kwakhona ziyafumaneka i-propane bbq enkulu, iphenyane, i-kayak kunye nebhodi yokubheqa yokuma. Kukho idokhi enendawo eninzi yezikhephe, kwaye ikwayindawo entle yokuqubha. I-Wood fired tub iyafumaneka ukuze isetyenziswe.
Kukho indlela yokunyuka intaba ekufutshane nendlwana enokufikelelwa ziindwendwe.
Ibhedi kunye neetawuli ziyafumaneka ukuze zisetyenziswe kwikhabhini.
Nceda uqaphele ukuba indawo ka-Airbnb ayibonisi indawo gabalala yendlwana. Akukho dilesi yesitrato yale ndawo- ikwi-16 km ukusuka eLa Ronge.
Ikhabhinethi iyafumaneka kwirenti yasebusika.
Uya kufuna oomatshini bekhephu ukufikelela kwikhabhinethi, asinabo oomatshini bekhephu abaqeshiswayo.
Akukho manzi ahambayo ekhabhathini kodwa sibonelela ngeejagi zamanzi okusela nawokucoca. Kukho indlu yangaphandle ebekwe kwipropathi.
I-tub eshushu eqhutywe ngamaplanga iyafumaneka ukuze isetyenziswe ebusika.
Ikhabhinethi ifudunyezwa ngesitovu somthi kunye nezifudumezi zodonga lwepropane. Indlu yeendwendwe inezifudumezi zodonga zepropane.
Le ndlu ikwindawo yabucala ekude lee kwezinye iikhabhini. Ikhabhini ekufutshane iku-1km ukusuka apho ingabonakali. Lo mhlaba umi kumgama oziimitha ezili-150 ukusuka kwiNut Point Hiking trail evumela amathuba okunyuka intaba kanye ngomnyango ongasemva. Ungaya kwiindawo ezininzi, kubandakanya uhambo lweyure ezi-3 ukuya esiphelweni somzila wepikiniki. Ngokwenene ilitye elinqabileyo lendawo kodwa ingekude kakhulu neLa Ronge. Iindwendwe zingathatha imizuzu engama-20 ukukhwela isikhephe ukuya ngasechibini laseLa Ronge ukuya kuthatha igrosari kunye neziselo ngaphandle kokuqhuba isithuthi.
Umbuki zindwendwe ngu- Shala
Sihlala kwi-Air Ronge kwaye ukuba kukho imfuneko sinokukukhokelela kwikhabhinethi kwaye sikubonise malunga nokuqinisekisa ukuba ukuhlala kwakho kukhululekile.